I-Adamant: Uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo olungaziwa lwamahhala nokuningi | Kusuka kuLinux
Namuhla, sizoqhubeka nokufaka isicelo esisodwa se- umlayezo osheshayo kuncane okwaziwayo emkhakheni we-Linux, obizwa "Adamant".
Ngokuyisisekelo, "Adamant" Kuyinto a uhlelo lokusebenza lwemiyalezo esheshayo umthombo ovulekile osuselwa ku- ubuchwepheshe be-blockchain (blockchain), yona esebenza njenge I-Crypto Wallet (Isikhwama se-Crypto) y Uhlelo lwe-Cryptocurrency Exchange System (Exchange).
"Adamant" kungokwesine uhlelo lokusebenza lwemiyalezo esheshayo ukubhebhetheka, okubuye kusetshenziselwe okuningi futhi kusatshalaliswe ngaphansi kobuchwepheshe be-blockchain, ngoba, kokuthunyelwe kwangaphambilini, esikumema ukuba ukufunde ngemuva kokuphela kwalokhu kushicilelwa, sabhala ngakho I-Juggernaut, i-Sphinx neSimo. Siveza okulandelayo okulandelayo:
"I-Juggernaut, i-Sphinx ne-Status ayinazo nje izinzuzo ezithokozisayo njengezicelo zemiyalezo, kepha futhi iyindlela noma izindlela zokukhokha, ngoba zisekelwe kubuchwepheshe be-blockchain." I-Juggernaut, i-Sphinx nesimo: Izinhlelo zokusebenza zokuthumela imiyalezo ezithandekayo.
1 I-Adamant: Imiyalezo Esabalalisiwe Engaziwa
1.1 Yini i-Adamant?
1.2 Izici ezifakiwe nokusebenza
1.2.1 Ukungaziwa kanye nobumfihlo
1.2.2 Ukwehliswa kwezikhundla kanye neBlockchain
1.2.3 Isikhwama se-Crypto
1.2.4 Uhlelo Lokushintshaniswa Kwe-Cryptocurrency
1.3 Imininingwane eyengeziwe
I-Adamant: Imiyalezo Esabalalisiwe Engaziwa
Ngamafuphi, i- Iwebhusayithi esemthethweni, ichaza uhlelo lokusebenza kanjena:
"Kuluhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo olungaziwa".
Kodwa-ke, njengoba sichazile ekuqaleni kokushicilelwa, kuyi- uhlelo lokusebenza lwemiyalezo esheshayo de umthombo ovulekile ngokususelwa kubuchwepheshe be-blockchain (blockchain) okusebenza futhi njenge-Crypto Wallet (Isikhwama se-Crypto) kanye ne-Cryptocurrency Exchange System (Shintshanisa). Futhi kulezi zici nezinye, sizocubungula ngezansi.
Izici ezifakiwe nokusebenza
Ukungaziwa kanye nobumfihlo
Abasebenzisi abadingi ukubhalisa noma ukufaka noma yiluphi ulwazi. Ayisebenzisi ama-imeyili noma izinombolo zocingo. Noma idatha yedivayisi yomsebenzisi (efana nebhuku lamakheli noma indawo). Futhi, ayinikezi idatha yekheli le-IP kwabanye abasebenzisi. Izindlela zobumfihlo nokubethela ezisetshenzisiwe zisezingeni eliphakeme. Indlela yokuthumela imiyalezo ingasebenzisa iTor Network ngokungaziwa kakhulu.
Ukwehliswa kwezikhundla kanye neBlockchain
Imiyalezo yayo esezingeni elizimele izimele kohulumeni, izinkampani kanye nabathuthukisi, ngakho-ke, akekho ongalawula, avimbele, angasebenzi, abeke umkhawulo noma ahlole ama-akhawunti. Yonke imilayezo ibethelwe nge-Diffie-Hellman Curve25519, Salsa20, Poly1305 algorithms futhi isayinwe yi-SHA-256 + Ed25519 EdDSA. Okhiye abayimfihlo abalokothi bashiye idivayisi esetshenzisiwe. Futhi ukulandelana kwemiyalezo kanye nokuthembeka kwayo kuqinisekiswe yipulatifomu ye-blockchain eyenziwe.
Inikeza abasebenzisi isikhwama se-Crypto esisebenziseka kalula, ukwenza lula ukufinyelela emhlabeni wama-cryptocurrensets ngokushesha. Ixhasa ama-cryptocurrensets alandelayo: i-Bitcoin, i-Ethereum, iLisk, i-Dogecoin, i-Dash, ne-Stably Dollar. Konke ngokusebenzisa umushwana wokungena kukho konke ukungena okukodwa, okunikeza umsebenzisi ukulawula okugcwele okhiye babo abangasese. Futhi ivumela futhi isize ukuthi abasebenzisi bangathola futhi benze izinkokhelo ngqo ngenkathi bexoxa noxhumana nabo, noma basebenzise amaBots angaqhuba imisebenzi.
Uhlelo Lokushintshaniswa Kwe-Cryptocurrency
Inikeza ngohlelo olusatshalaliswayo lokushintshana ngokungaziwa, okwenza kube lula kubasebenzisi ukuthi bathenge / bathengise (bathengise) izimpahla zedijithali ngokungaziwa, ezazigcinwe ngaphambili futhi zidlulisiwe, besebenzisa izingxoxo.
Isebenzisa ilayisense le-GPLv3, evumela ukubuyekeza ikhodi yomthombo, kufaka phakathi i-node yeBlockchain, umthetho olandelwayo wezokuxhumana kanye nezicelo zemiyalezo yeklayenti.
Ukulanda ku-Linux, ungakwenza chofoza isixhumanisi esilandelayo etholakala kuwebhusayithi yayo esemthethweni, yokulanda isifaki ku Ifomethi ye-AppImage », Of the inguqulo yamanje ezinzile (2.7.0), futhi ukuthola eminye imininingwane ungavakashela ngqo i- iwebhusayithi esemthethweni ku-GitHub. Futhi inabafaki be- Windows, MacOS, Android, iOS kanye Tor, kanye neklayenti lewebhu eku-inthanethi.
Kanye Iphakethe le-AppImage, ingafakwa ngesikhombimsebenzisi sokuqhafaza, isinike imvume yokuyisebenzisa kusuka kumphathi wefayela osetshenzisiwe nokwenza iphakheji kusuka lapho ngegundane. Lapho senziwa, singangena ngokwakha nangokufaka ifayela le- umushwana wokungena kusuka ewindini lokuqala. Ngemininingwane engaphezulu ngaleli phuzu ungachofoza kokulandelayo isixhumanisi.
Uma ungene ngemvume kuhlelo lokusebenza, okulandelayo kuyaboniswa ukubukwa nemininingwane:
Njengoba kungabonakala, "Adamant" kuyajabulisa uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo ngokushesha zohlobo I-PWA (Ukuqhubeka Kokusebenza Kwewebhu / Ukuqhubeka Kokusebenza Kwewebhu) kufanele uzame ukwazi okwengeziwe ngomhlaba Defi.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Adamant», okuthakazelisayo nokuncane okwaziwayo uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo ngokushesha umthombo ovulekile osuselwa ku- ubuchwepheshe be-blockchain (blockchain) yona esebenza njenge I-Crypto Wallet y Uhlelo Lokushintshaniswa Kwe-Cryptocurrency; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Adamant: Uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo olungaziwa lwamahhala nokuningi
ILibreOffice New Generation ifuna ukuheha abantu abasha abengeziwe kwiLibreOffice nomphakathi ovulekile